बलात्कारका आरोपी बीजेपी सांसदलाई किन पक्रेन यूपी प्रहरीले| Nepal Pati
बलात्कारका आरोपी बीजेपी सांसदलाई किन पक्रेन यूपी प्रहरीले
काठमाडौं । उत्तर प्रदेश स्थित उन्नावका एक बालिकाको बलात्कारका अभियुक्त भारतीय जनता पार्टीका नेता कुलदीप सिंह सेंगरलाई उत्तर प्रदेश प्रहरीले पक्राउ नगर्ने भएको छ ।
भारतीय दण्ड संहिता को ३६३,३६६,३६७ र ५०६ धारा अनुसार मुद्दा दर्ता हुनुपर्छ किन भने पीडित नाबालिक छिन् । यसकारण पाक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफ़ेंसेस एक्ट, २०१२) का अनुसार यो मुद्दा दर्ता गरेपछि लागिरहेको थियो कि सांसद कुलदीप सेंगरलाई पक्राउ गरिने छ ।
तर विहिबार लखनऊमा उत्तर प्रदेशका प्रमुख सचिव (गृह) अरविन्द कुमार र प्रहरी महानिर्देशक ओपी सिंहले प्रेस कन्फ्रेन्स गरेर यो मुद्दा अब सीबीआई लाई दिने बताए । यसकारण अब कुलदीप सेंगरको पक्राउको फैसला सीबीआईले गर्नेछ । प्रेस कन्फ्रेन्समा दुबै दुबै अधिकारीका अनुसार सांसद कुलदीप सिंह सेंगर अहिले नै दोषी छैनन् ।
आरोपको आधारमा उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराइएको हो । यो मुद्दा सीबीआई लाई हस्तान्रण गरिउको छ । यसकारण अब संसाद जी को पक्राउको बारे मा केही भन्न सकिने अवस्था छैन । र योनै चलिआएको प्रक्रिया हो । प्रहरी महा निर्देशक ओपी सिंहले भने, ‘सीबीआई अब यो मुद्दामा साक्षी जुटाउने काम गर्छ । यसबीच पीडितको परिवारको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ ।
तर जब प्रेस कन्फ्रेन्समा पत्रकारले उनलाई सोधे कि पाक्सो एक्ट में पीड़ितको बयान पछि आरोपि पक्राउ गर्ने प्रावधान छ । के यस मुद्दामाको बेग्लै तरिकाले ट्रिट गरिँदै हो ?पीडक कसरी खुलेआम घुमिरहेको छ ?
यसको जवाफमा ओपी सिंहले भने, १७ अगस्ट, २०१७ मा पहिलो पटक यस मुद्दामा शिक़ायत गरिएको थियो । त्यसमा सांसद जी को नाम आएको थिएन । अहिले पनि उनी अभियुक्त हुन् । त्यसो भए तपाईहरु भन्नुस् उनलाई के आधारमा रोक्न सकिन्छ ? यो भन्दा अघि लखनऊ अञ्चलका अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक राजीव कृष्णले यो मुद्दामा एसआईटीको रिपोर्ट सरकारलाई दिइसकेको थियो ।
डीआईजी लव कुमारले यस मुद्दामा जेल प्रशासनको भूमिकामा बेग्लै जाँच रिपोर्ट पनि पेश गरेको छ । त्यहीँ जिल्ला अस्पतालले के के गल्ति भएको थियो, त्यस उपर सरकारका जिल्ला प्रतिनिधीबाट रिपोर्ट लिएको थियो ।
बेलायतको पाँच मस्जिदमा एक पछी अर्को हिंस्रक आक्रमणम
काठमाडाैं । बेलायतको बर्मिंघम शहरमा पाँच मस्जिदमा ...
बेल्जियम । शान्तीको प्रतिक मानिने घर पालुवा पंक्...
रोबोट चौकिदारको सफल परिक्षण गर्दै चीन
चीन । चीनले सन २०१८ को डिसेम्बर देखी परिक्षण शुरु ...